Ubuhle kunye nempilo Ukunyamekela ubuso
Ikhumba elidibeneyo libhekwa njengoluhlobo oluqhelekileyo lwe-epidermis. Ukunyamekela kuye kwaba ne-80% yabantwana abaselula, malunga nama-50% abantu abangaphantsi kwe-25 kunye nabadala abangama-15%. Ukuba ukholelwa ukuba imanani, kunye nobudala, i-epidermis ye-fat iyakushintsha ibe yinto eqhelekileyo.
Ukunyamekela uhlobo lwesikhumba oludibeneyo
Kwikhumba elixubekileyo, iintlobo ezimbini zidibeneyo: ziqinile kwi-T-zone kwaye zome okanye ziqhelekileyo kwindawo yesitye. Isalathiso salo - iingqungquthela ezixhambileyo zifumanekanga. Ngoko ke, kwi-T-zone, i-fat-cutaneous is produced in a large amount.
Ukubukeka okulungileyo kunye nokuthintela iingxaki ze-dermatological, abanikazi bokunakekelwa kwesikhumba edibeneyo kufuneka baqwalaselwe ngokucophelela nangokuchanekileyo. Ngaphandle koko, kuyimfuneko ukulwa namachashaza amnyama avela, ukoma kunye nokuqhayisa ngamandla.
Ngezihlandlo ezahlukeneyo zonyaka, isimo sengqondo esibhekiselele kwi-epidermis sifanele sibe sihle kakhulu. Ehlotyeni, umzekelo, intlawu enxulumene nayo kufuneka ikhangelwe njengokuba i-oily: sebenzisa i-creams elula kunye nokukhanya, ukucoca i-gels, ukuhlamba kunye nemaski echaphazela ukutshabalalisa. Ebusika, kucetyiswa ukuba kuqhutywe ngemali yohlobo olumileyo lwe-epidermis.
Ngaliphi na ixesha lonyaka udinga ukhilimu obusondeza ubusuku. Sebenzisa ngokukhethekileyo imihla ngemihla. Inyaniso kukuba ebusuku ubuncwane obunqabileyo kwi-T-zone ukusebenza ngokunyanisekileyo, amaninzi amaninzi aveliswa, ngenxa yesikhumba esikhatyeni sinokuba nzima.
I-Cosmetic tonal base, efanelekileyo yesikhumba
Abanikazi bomhlaba odibeneyo we-epidermis kufuneka banike ukhetho kwiindlela, eziqulethwe ngamanzi, zingabi zihlambulule. Isiseko esinjalo asiyi kulubeka iiferethi kwaye silale ngocingo olufanayo. Kwaye ukuba imimandla eyomileyo ayabelwe, izilwanyana zesikhumba edibanisiweyo kufuneka zixutywe kunye ne-krimu yosuku oluqhelekileyo.
Ehlobo, i-cosmetologists incoma ukukhetha okukhethiweyo kunye nezinga le-SPF-ukhuseleko ezintandathu okanye ezine. Ukongezelela, ingqalelo kufuneka ihlawulwe ukuqinisekisa ukuba izimonyo zi- hypoallergenic .
Iindlela zokuhlamba igranti
Nonyamekela ukhethe abachaziweyo kunye nabahlambululi. Kumele ukuba ziphumelele, kodwa zincinci. Emva koko, kubalulekile ukucoca iindawo ezinamanci kakuhle, kodwa ungawomise oomileyo.
Inguqu efanelekileyo yokuhlamba:
Faka isicelo se-gel, ubisi okanye i-tonic elukhumbeni kunye nomgca obuncinane.
Gcoba ngobuso bakho ubuso bakho ngeeminwe ezimbini ukuya kwemizuzu emithathu.
Geza nge siponti okanye ipotton pad idibene ngamanzi apholileyo.
Ukuvuvukala kweentlobo - izizathu, iimpawu kunye nokunyangwa kwe-gingivitis, i-periodontitis, i-periodontitis
Ukuhlaselwa kwesigxina seengcambu zezinyo
Ukongezwa kwe-Eyelash - kunye nee-minus
Ukuhlanjululwa emva kokuphuma kwezinyo ukuze kuphulukiswe i-gum
Unokunyamekela njani i-eyelashes eyongeziweyo?
Ukususwa Kwamazinyo Okususa
Kulungile kangakanani ukukrazula amashiya?
Ukubetha ebusweni ngaphandle kwesizathu
Iintlungu ezityhutyayo kwizinyo
Ngokukhawuleza ndingawususa njani ubuso bam?
I-oil yeSesame yeenwele - ezifanelekileyo zokupheka zesicelo
Iikisi zekhishi - indlela yokukhetha ithuluzi elifanelekileyo nelithembekileyo?
Iimidlalo zemidlalo kwi-sauce - iresiphi
Indlela yokufunda ukudada umntwana iminyaka eyi-10?
Izaphulo ezisuka kwiivenkile zendlu - intlawulo yokuthuzela
Umhlobiso we window
Ikhekhe kwi yogurt - iresiphi
Ngaba ndinokuhlamba umntwana wam ngokubanda?
I-steak - recipe
U-Karl Lagerfeld unethemba lokuba uKardashian ngokwakhe unecala lokuphanga
La Perla ngaphantsi kweengubo
Mackerel - izakhiwo ezincedo
Iimbobo zezinwele eziphambili ze-2014
Ungajonga njani i-adrenal glands?
I-Eurovision abaphumeleleyo ngeminyaka
UMegan Markle uthetha ngamanyathelo akhe okuqala kumendo wokubamba
Oku kuya kuphuhliswa njani? Iifoto ezingama-17 malunga nokuba isisu asihambisani nejee
Amaphiko e-honey sauce
Indlela yokupheka iphariji kwi-multivariate?